China board multilayer high Tg haingana miaraka amina fanitrihana volamena ho an'ireo mpanamboatra sy mpamatsy modem | Kangna
haingana multilayer High Tg Board misy volamena fanitrihana ho an'ny modem
Karazana fitaovana: FR4 Tg170
Ny hatevin'ny birao vita: 2.0mm
Fotoana fitarihana: 12 andro
Rehefa miakatra amin'ny faritra iray ny mari-pana an'ny board circuit Tg avo dia miova ny substrate avy amin'ny "state vera" ka lasa "state rubber", ary ny mari-pana amin'izao fotoana izao dia antsoina hoe march transition glass (Tg) an'ny lovia. Raha atao teny hafa, ny Tg no mari-pana avo indrindra (℃) izay mijanona ho henjana ny substrate. Midika izany fa ny fitaovana PCB substrate tsotra amin'ny mari-pana ambony dia tsy vitan'ny fanalefahana fanalefahana, fiovana, fanalefahana ary fisehoan-javatra hafa, fa mampiseho koa ny fihenan'ny fihenan'ny mekanika sy ny herinaratra (heveriko fa tsy te-hahita ny vokatr'izy ireo hiseho amin'ity tranga ity ianao. ).
Ny takelaka General Tg dia mihoatra ny 130 degre, ny Tg ambony amin'ny ankapobeny dia mihoatra ny 170 degre, ary ny medium Tg dia mihoatra ny 150 degre.
Matetika, ny PCB miaraka amin'ny Tg≥170 ℃ dia antsoina hoe board circuit Tg avo.
Ny Tg an'ny substrate dia mitombo, ary ny fanoherana ny hafanana, ny fanoherana ny hamandoana, ny fanoherana ny simika, ny fanoherana ny fitoniana ary ireo toetra hafa amin'ny fantsom-pifandraisana dia hihatsara sy hatsaraina. Arakaraky ny maha avo ny sanda TG no mahomby kokoa ny fahombiazan'ny fanoherana ny maripana amin'ny takelaka. Indrindra amin'ny dingana tsy misy firamainty dia matetika ampiharina ny TG avo.
High Tg dia manondro ny fanoherana ny hafanana avo. Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny elektronika, indrindra ireo vokatra elektronika soloin'ny solosaina, mankany amin'ny fampandrosoana ny avo lenta, multilayer avo, ny filàna fitaovana PCB substrate fanoherana hafanana avo kokoa ho antoka lehibe. Ny fivoarana sy ny fivoaran'ny haitao fametrahana avo lenta izay soloin'ny SMT sy CMT dia mahatonga ny PCB hiankina bebe kokoa amin'ny fanohanan'ny fanoherana ny hafanana avoakan'ny substrate amin'ny resaka aperture kely, tariby tsara ary karazana mahia.
Noho izany, ny fahasamihafana misy eo amin'ny FR-4 tsotra sy i FR-4 avo dia ny amin'ny toetr'andro mafana, indrindra aorian'ny hygroscopic sy ny hafanana, ny tanjaka mekanika, ny fahamarinan-toerana, ny firaiketam-po, ny fitrohana rano, ny fikajiana amin'ny hafanana, ny fanitarana amin'ny hafanana ary ny toe-javatra hafa tsy mitovy ny fitaovana. Ny vokatra Tg avo dia miharihary fa tsara kokoa noho ny fitaovana maoderina PCB substrate. Tao anatin'izay taona lasa izay, ny isan'ny mpanjifa mitaky tabilao circuit Tg avo dia nitombo isan-taona.
Previous: Saron-tava solder 3 oz mametaka takelaka varahina mavesatra ENEPIG
Manaraka: birao fananganana keramika vita amin'ny volamena mitokana tokana